Kubulawe osolwa ngokubulala ashumpule umfana, 3, ikhanda | isiZulu
Kubulawe osolwa ngokubulala ashumpule umfana, 3, ikhanda
Abesifazane batalabhe indoda eshumpule isandla sentombi
Zimkhalele oshumpule uzakwabo ikhanda
Zimkhalele oshumpule iziguli izinhlamvu zobudoda
Johannesburg - Kubulawe indoda esolwa ngokubulala umfana oneminyaka engu-3 ubudala endaweni yase-Eldorado ngaphandle kwaseBochum eLimpopo.
UFederick Makeke ubeyingane ebihlezi ijabulile ebiletha injabulo emndenini kanti ngesikhathi isidumbu sakhe sesitholakala singenakhanda izakhamuzi zonke zahlasela indoda eyayilungisa uphahla emzini wakubo.
Le ndoda yafunwa yaze yatholwa yabhaxabulwa kanzima yalengiswa.
OLUNYE UDABA: Zimkhalele oshumpule uzakwabo ikhanda
Isidumbu salo mfana satholwa ngumalume, uMasilo Mpashi, silele edamini legazi emini.
Izakhamuz zikholwa wukuthi lo mfana wabulawela umuthi.
Ngokusho kwaloyo okhulumela amaphoyisa uColonel Ronel Otto lo mfana nomunye babelele eceleni kwendlu ngesikhathi umsolwa emthatha emfaka kwelinye igumbi lapho okwenzeka khona isigameko, kubika iDaily Sun.
“Umsolwa watalajwa kanzima yizakhamuzi ezazibhodla umlilo ngaphambi kokuba abulawe.”
U-Otto uphinde wathi akukaboshwa muntu ngamacala okubulala kodwa kuyaphenywa.
Kushone iphoyisa likamasipala esigamekweni sokuphanga
Iphoyisa elisebenza ngaphansi kweJohannesburg Metro Police Department, ebelingekho emsebenzini, lidutshulwe ngemuva kokuzama ukusiza kubanjwa inkunzi.
I-Ahmed Kathrada Foundation ikhiphe isitatimende yazwakalisa ukuncoma inkulumo yokuqala kaMengameli Cyril Ramaphosa yokuvula iPhalamende, kepha yaxwayisa ngokuthi amazwi akhe kufanele "alandelwe yizenzo".
Amaphoyisa agxeke izigameko eziqhubekayo zokuzibambela umthetho ngezandla okwenziwa wumphakathi eLimpopo kulandela esinye isehlakalo esenzeke ngaseGa-Mokgotho.